Isamsung yazisa i-Galaxy A50 ngokusemthethweni eSpain | I-Androidsis
I-Samsung Galaxy A50 ifika eSpain ngokusemthethweni
Isamsung okwangoku ihlaziywa ngokupheleleyo kuluhlu lwaphakathi. Ke ngoko, kwezi veki zidlulileyo sikwazile ukubona iifowuni ezininzi ngaphakathi koluhlu lwenxalenye yabo. Enye yeemodeli inkampani yaseKorea esishiyileyo yi-Galaxy A50, Ukucaciswa kabani bayishiya iyeyona igqibelele ukuza kuthi ga ngoku. Le modeli ngoku isungulwe ngokusemthethweni eSpain.
Kungekudala emva kokubonakaliswa kweGalaxy A50, Baqala ukufika idatha yokuqala kwixabiso ukuba olu luhlu oluphakathi lwaluza kuba nalo ekumiselweni kwalo ezivenkileni. Okokugqibela, ngoku ukuba iphehlelelwe eSpain, sele sazi ukuba leliphi ixabiso le fowuni evela kwinkampani yaseKorea eya kuba nayo.
Kule meko, sifumanisa ukuba uhlobo olunye lwefowuni lwaziswa ngokusesikweni eSpain. Le nguqulo ene-4 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yokugcina kwangaphakathi. Asazi ukuba oku kuqinisekisiwe, okanye ukuba enye inguqu iya kuthengiswa kungekudala.
Ngokubhekisele kwixabiso elinayo le Galaxy A50 ekufikeni kwayo eSpain, ukuvuza bekukulungile. Kungenxa yokuba Uluhlu oluphakathi luza ngexabiso lama-euro angama-349. Ixabiso elifanelekileyo kule modeli ibizwa ukuba ikhokele phakathi kuluhlu lwegama laseKorea kwezi nyanga zizayo.
Kubasebenzisi abanomdla kwi-Galaxy A50, banokukhetha kwimibala eliqela. Ifumaneka ngombala omnyama, oluhlaza okwesibhakabhaka, wekorale kunye nomhlophe. Imibala esele siyibonile kwinkcazo-ntetho yayo. Kuyenzeka ukuba uyithenge sele ikwiwebhusayithi yakwaSamsung. Kule meko, ukubakho kwayo sele kungoku nje. Kuba eAmazon ayinjalo.
KwiAmazon kubonakala ngathi ukwaziswa kwefowuni kuya kwenzeka kwisithuba seenyanga ezi-1-2. Asazi ukuba yimpazamo okanye ukuba ulinde ixesha elide de uthenge le Galaxy A50 evenkileni. Ixabiso liyafana, njengoko ubona kwesi sixhobo. Ucinga ntoni ngolu luhlu luphakathi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » I-Samsung Galaxy A50 ifika eSpain ngokusemthethweni
Iimpawu eziguqukayo ziya kufika kuGoogle Play
I-Redmi 7: Uluhlu olutsha lokungena lukaXiaomi lusemthethweni